साँढेको जुधाइ बाछाको मिचाइ, अति भो ! - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home बिचार साँढेको जुधाइ बाछाको मिचाइ, अति भो !
त्यसो त नेपालको राजनीति सदियौंदेखि सीमित वर्ग, समूह एवं व्यक्तिको सुविधाको माध्यम बन्दै आएको छ । लामो राजनीतिक लडाइँपश्चात् संविधानसभाबाट संविधान निर्माण र आमनिर्वाचनबाट बहुमतको सरकार बनेपछि राजनीतिक स्थायित्व र विकास हुने आशाको सुरुवात भएको अवस्थामा फेरि नेता व्यक्तिगत स्वार्थ, पद, प्रतिष्ठा र पैसाका लागि भिडन्त गरिरहेका छन् । जनताले केही व्यक्तिको सत्ताको संघर्षका समाचार र बैठकका दृश्यबाहेक विकास, समृद्घि र विधिको शासनका देख्न र अनुभव गर्न पाएका छैनन् । देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने दृष्टिकोण नै नभएका नेतागण र दास मनोवृत्तिका कार्यकर्ताका कारण सचेत, सभ्य र देशलाई माया गर्ने नागरिकको मन सिसाझैं चर्किएको छ । साँढेको जुधाइ बाछाको मिचाइ भनेझैं आधा दर्जनको संख्याका नेताको शक्तिसंघर्षमा ३ करोड नेपालीले दुःख पाइरहेका छन् ।
यो सरकार बनेको साढे दुई वर्षको अवधिमा जनताले महसुस गर्ने कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन । अनेक प्रकरणको माझमा लोकलाज पचाउँदै अगाडि बढिरहेको सरकारका विगत केही महिनाबाट आफ्नै दलका शीर्ष भनिने वृद्घ उमेर समूहका नेताको बीचमा भएको आरोपप्रत्यारोप, घटिया हरकतले नेपालीको शिर निहुरिएको छ । लोकतन्त्रको साख घटाएको छ । कुनै पनि व्यवसाय नभएका सर्वहारा भनिने यिनको काठमाडौंमा घर, घडेरी, गाडी, बंैक ब्यालेन्सलगायत ऐसआरामको जीवन छ । तर, विडम्बना ! अर्बाैं रुपैयाँका भ्रष्टाचार, कमिसनलगायत देशको आर्थिक ढुकटी कब्जा गरेका यिनीसँग न त देश विकास गर्ने भिजन छ, न त इच्छाशक्ति नै ।
मुलुकमा राजनीतिक व्यबस्था बदलियो तर यहाँका निर्णायक ठाउँमा रहेका नेतागण कपट, बेइमान, आत्मकेन्द्रित भएका दृष्टान्त छताछुल्ल भइसकेको छन् । विधि नमान्ने, गुट चलाउने, आर्थिक चलखेल गर्ने, सुविधामा रमाउने, संवैधानिक निकाय कब्जा गर्ने, निम्नस्तरको बोली व्यबहार प्रदर्शन गर्ने, अलोकतान्त्रिक आचरण भएका नेतागणका कारण लोकतन्त्र बाँदरको हातमा नरिवल भनेझैं भएको छ । राजनीति सीमित व्यक्ति र समूहको दुहुनो गाई भएको छ । कमाइखाने स्रोत भएको छ । के राजनीतिमा अनुशासन हुँदैन ? लोकलाज हुँदैन ? धर्म कर्म हुँदैन ? विधि विधान हुँदैन ? जवाफदेहिता हुँदैन ? काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भनेझैं दशकौंदेखि नेपाली जनताको बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्रका नाइके र वरिपरिका नातागोता एवं पुजारीको रजाइँका लागि मात्र हो लोकतन्त्र ?
नेतामा देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने क्षमता र दृष्किोण चाहिन्छ
नागरिक राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको पर्खाइमा रहेको बेला दलका नाइकेको आन्तरिक शक्तिसंघर्ष उत्कर्षमा पुगेको छ । राजनीतिक परिवर्तन पछाडि अहिलेसम्म एउटा संविधानको किताब, सातवटा प्रान्तीय सरकार, ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकारबाहेक जनताले के पाए ? देश विकास नागरिक चाहनालाई कुल्चिएर आन्तरिक झैझगडामा समय गुजार्ने राजनीतिक दुष्कर्मलाई जनताले नजिकैबाट हेरिरहेका छन् । देशलाइ केन्द्रमा राखेर काम गर्ने आचरण नभएको नेतृत्वका कारण आज मुलुक डोकोजस्तो जताततै विसंगतिका प्वालले भरिएको छ । एकातिर टाल्न खोज्यो अर्कोतिरबाट समस्या देखिने स्थितिमा छ । देशलाई कमजोर बनाउने, जनतालाई गरिब बनाउने र आफ्नो दुनो सोझाउने सीमित नेताको चक्रव्यूहमा सिंगो मुलुक फसिरहेको छ । देशलाई नेताको व्यक्तिगत टकराव र स्वार्थको वरिपरि रोटेपिङजस्तो कहिलेसम्म घुमाइरहने ? यो मुलुकका सचेत नागरिक, लेखक, विश्लेषक, प्रबुद्घ वर्ग, प्राज्ञिक क्षेत्रका व्यक्ति एवं व्यक्तित्वले के सोच्दा हुन् ? सही र गलत छुट्याउने सक्ने सचेत वर्गको मथिंगलमा के गुज्रिइरहेको होला ? कूटनीति नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले नेपाल र नेपालीलाई कसरी मूल्यांकन गर्दो हो ? अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट दलको आन्तरिक फोहोरी हरकत कुनै सैद्घान्तिक वा देश विकासको एजेन्डामा आधारित भएको भए जनता खुसी हुने थिए । यसको राष्ट्रिय महŒव हुने थियो । घटनाक्रम नितान्त व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थको नांगो नाँचको रूपमा विकसित भइरहेका छन् ।
अहिले राजनीतिक दलहरूमा मौलिक सिद्घान्त, निष्ठा, जवाफदेहिता भन्ने नै छैन । नागरिकलाई उत्तेजित बनाउने, सपना बाँड्ने र आप्mनो स्वार्थसिद्घ गर्ने, स्वार्थपूर्ति हुन सकेन भने आपसी खिचातानी र निर्लज्ज हुन पछाडि नपर्ने जस्ता अत्यन्त निम्नकोटीका हर्कत हुने गरेका छन् । देश विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, कार्ययोजना, विकासको भिजन हुनुपर्दछ । उमेर, ज्येष्ठता, जेलमा बसेको अवधि जस्ता मापदण्डका आधारमा नेतृत्वमा पुग्ने र राजनीतिक चालबाजीबाहेक यो पुस्ताका नेतृत्वबाट देश र जनताले केही पाउन सकेनन् ।
यो मुलुकका कुनै पनि योजनामा कमिसनको खेल नभएको पाइँदैन । राजनीतिलाई समावेशी, समानुपातिक राजनीतिक प्रणाली बनाएर आफ्नै श्रीमती, छोरी, बुहारी, भाइभतिजा, आफन्तजन र ठूला व्यापारीलाई नियुक्ति गर्ने र देशको ढुकुटीमा रजाइँ गर्ने यी नेतालाई नेपाली जनताले कहिलेसम्म टुलुटुलु हेरेर बस्ने ? राजनीतिक नियुक्तिमा भागबन्डा, अख्तियार, न्यायालय, संवैधाकि निकायमा भागबन्डा, माथिल्ला पदमा पैसाको चलखेल, सरकारी जग्गामा यिनकै चलखेल, शिक्षा र स्वास्थ्यमा राजनीतीकरण, अब त अति भयो ।
मुलुकलाई हाँक्न कठोर निर्णय क्षमता र कार्यान्वयनको इच्छाशक्ति चाहिन्छ । देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने क्षमता र दृष्किोण चाहिन्छ । विधिको शासनमा विश्वास गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ । नेतृत्वमा त्याग गर्नसक्ने सफा मन चाहिन्छ । देश विकासको भिजन, काम गर्ने मिसन र आवश्यकताअनुसार एक्सन भएको गतिशील राजनेता चाहिन्छ । राम्रो योजना, चुस्त प्रशासन, सेवामुखी कर्मचारीतन्त्र चाहिन्छ । पदलोलुपता र धन आर्जनको जिज्ञाशाले भरिएको मन भएको नेतृत्वले कुराबाहेक केही गर्न सक्दैन । विकासका गफ दिएर जनतालाई कहिलेसम्म ठग्ने ? राजनीति र राज्य सञ्चालनको शैली केटाकेटी आए गुलेली चलाए भनेझंै भएको छ ।
खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन भनेझैं अहिलेको सरकारलाई विकास गर्न केले रोक्यो ? केले छेक्यो ? प्रधानमन्त्रीले आप्mनै दलका मान्छेले विकास गर्न दिएनन् भनेर कोकोहोलो गर्ने कि कमीकमजोरी हटाएर राम्रा काम गर्दै जाने ? जनताको मतबाट बनेको प्रधानमन्त्रीलाई भारतले हटाउन चाहन्छ भनेर रुन्चे मुख लगाउने कि कूटनीतिक मर्यादामा बस्ने ? भ्रष्टाचारीलाई काखी च्यापेर हिँड्ने कि कारबाही गर्ने ? सिद्घान्त, निष्ठा र जवाफदेहितामा रहेर कुरा गर्ने कि उखानटुक्का भन्दै मजाक गर्ने ? प्रधानमन्त्रीले चाहेमा भ्रष्टाचार हट्न सक्दैन ? आपूmले भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने भनेका प्रधानमन्त्रीले काम गर्नुपर्दैन ? भ्रष्टामन्त्रीलाई ठेगान लगाउनुपर्दैन ? भ्रष्ट कर्मचारीलाई काबाही गर्नुपर्दैन ? हरेक ठाउँमा विवादित काम गर्न मिल्छ ? मुलुकमा सुशासन, आर्थिक समृद्घि, रोजगारीको अवसर, महँगी नियन्त्रण र जनताको सहज जीवनयापनको व्यवस्था गरी कोरोनाको महामारीसँग लड्नुपर्ने बखतमा पार्टीभित्रको रडाको, प्रधामन्त्रीको लाटो हठ, नेताका आआफ्नै स्वार्थ, के मुलुकलाई सधैंभरि यी सीमित नेतागणको स्वार्थको खेलमा फसाइरहने ? समाजले सोच्ने बेला आएको छ ।
मुलुकमा तमाम समस्या छन् । कोरानाले समाज विक्षिप्त भएको छ । बाढी पहिरोको जोखिम छ । क्वारेन्टाइन स्तरीय हुन नसकेको गुनासो छ । बालुवाटार र सिंहदरबार वरिपरि नै कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै छ । शैक्षिक संस्था ठप्प छन् । विद्यार्थीले परीक्षा दिन पाएका छैनन् । जनतालाई बेरोजगारी समस्याले सताएको छ । उल्लिखित समस्याको समाधान खोज्ने कि लडिरहने ? दुनियाँ हँसाइरहने ? सरकारले यतातिर ध्यान दिएर काम गर्नुपर्दैन ? समय छँदै होस आओस् ।
तुलसीपुरमा ट्याक्टर पल्टिदा सहचालक घाइते
प्रदेश ५ ओपेन्द्र बस्नेत - June 8, 2020 0
तुलसीपुर । तुलसीपुमरा ट्याक्टरको ट्राली पल्टिदा एक सहचालक घाइते भएका छन् । बिजौरीबाट बालुवातर्फ जाँदै गरेको रा १ त ८६९ नम्बरको ट्याक्टरको ट्राली पल्टिदा...
प्रदेश १ भगीरथ भण्डारी - August 10, 2020 0
Breaking News राजधानी समाचारदाता - February 26, 2020 0
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने निर्णय गरेको छ । बधुबार प्रधानमन्त्री निवास...
प्रदेश ईश्वर तामाङ - February 7, 2020 0
उदयपुर । जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले नियमित चेकजाँचको क्रममा ४ जनालाई लागुऔषधसहित पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले त्रियुगा नगरपालिका– १३ बाट त्रियुगा...